राराको डिलबाट प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनः डेढ दशकको काराबास रहर होईन, पूर्णपाठ हेर्नुहोस – गोर्खा संसार
राराको डिलबाट प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनः डेढ दशकको काराबास रहर होईन, पूर्णपाठ हेर्नुहोस
गोर्खा संसार२०७५, १ बैशाख शनिबार ०९:२८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँले मुलुकले नयाँ गति लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । समृद्धिको युग शुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले के नेपाल बन्छ ? के हामी समृद्ध बन्छौ ? भन्ने प्रश्न गर्ने दिन गएको उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
जनताको विश्वास प्राप्त जनप्रतिनिधि भएकाले बिना कुनै वहाना देश विकासमा अग्रसर हुने उहाँले बताउनु भयो । आफ्नो देश आफै बनाउन सक्छौ भन्ने उच्च मनोबल र दृढताका साथ अबको अभियान जारी रहने उहाँको भनाइ छ ।
गौतम बुद्धको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली शान्ती, करुणा भएको मुलुकमा बुद्धको उपदेशका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो । अब विकास र समृद्धि कुनै काल्पनिक कुरा नभएको र युग बदलिएसँगै सोचपनि बदलिएको उहाँको भनाई छ ।
मित्र राष्ट्रसँग मित्रवत व्यवहार गर्दै अगाडी बढ्ने र आफुले बोलेका हरेक कुराहरु पुरा गर्दै लैजाने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा आफ्नो डेढ दशकको कारागार जीवन सम्झिदैं उहाँले त्यो कुनै रहर नभइ मुलुकको परिवर्तन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सुखी जनताको कल्पनासहितको कठिन यात्रा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनताको सेवामा समर्पित हुने बिषय दोहो¥याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले चाहेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै धनी र गरीबबीचको दुरी नजिक्याउन प्रतिबद्ध रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले सम्भावना नै सम्भावना बोकेको राराजस्ता पर्यटकियस्थलको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्दै आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा सहजता ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । जनताले चाहेको परिवर्तन हुँदाहुँदै अझैपनि विभिन्न वहानामा गरिने अराजक गतिविधिहरुलाई क्षमा नदिइने उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडी बढाउँदै देशका विभिन्न सम्भावित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनागरी रोजगारीको सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण अंग नीजि क्षेत्रलाई शसक्तिकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
देशमा रहेका विभिन्न कृर्षि क्षेत्रहरुको विकास गर्दै उत्पादनमा बढावा दिने उहाँले बताउनुभयो । परनिर्भरतालाई घटाउँदै आफ्नै जमिनमा उत्पादकत्व बढाउने र त्यसको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो । कृर्षिमा आधुनिकीकरण गर्दै बढी भन्दा बढी उत्पादनकमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो । शिक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्दै रोजगारीको गयारेन्टीसहितको शिक्षामा जोड दिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
मानिसको अभिन्न अंग स्वास्थ्यको बिशेष ख्यालगर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको योजनालाई साकार पार्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । समाजमा महिलाहरुमाथि हुने विभिन्न किसिमका लाञ्छाना, अभद्र व्यावहार गर्नेलाई कानुनी कडघेराका उभ्याई कडा कारवाही गर्न सरकारले कन्जुसाई गर्ने छैन्, प्रम ओलीको धारणा थियो ।